Trump ma loo ogolyahay in uu cid kale la wadaago siraha muhiimka ah ee Maraykanka? - BBC News Somali
Image caption Waxaa la rumaysan yahay in sirtan ay la xiriirtay Dawladda Islaamka lalana wadaagay Ruushka
Xogtaas oo lagu suntay "codeword classified", ayaa ahayd mid aad muhiim u ah.
Top secret: Xogaha dahsoon ee darajadeedu sarayso waa macluumaad ay dawladdu rumaysan tahay "in ay macquul tahay" in ay gaysan karto waxyeello wayn oo soo gaarta ammaanka qaranka sida uu qoray The Economist, 1.4 milyan oo ruux ayaa awoodda in ay la socdaan.
Secret : Sirtan darajada labaad ah waa mid ay "macquultahay in laga filanayo in ay waxyeello wayn gaysato
Confidential: Sirtan darajada saddexaad ah "waa mida ay macquultahay in ay si sahlan waxyeelo ugu gaysan karto ammaanka qaranka, xogtan waxaa lala wadaa askarta maraykanka intooda badan.
Shaqaale FBI ah oo qirtay in uu "Shiinaha u shaqaynayay"
Marka xog sir laga dhigo waxaa la dajiyaa wakhti ay sirnimada ka baxdo. Mararka qaar waxaa laga yaabaa in ay timaado dhacdo tilmaamaysa in xogtii hadda dadka lala wadaagi karo, siraha qaarkoodna wakhti cayiman ayaa loo qabtaa, haddii labadaas arrimood aysan midoodna dhicin isla markaasba waxaa la go'aamiyaa in 10 sano la qariyo, si kastaba ha ahaatee waxaa xogtaas la sii qarin karaa 25 sano.
Xogta oo sirnimadii laga saaro wakhtigii lagu heshiiyay ka hor amaba in hoos loo dhigo heerkeeda waa go'aan uu qaadan karo qofkii marka hore macluumaadka bixiyay ee heerkaas jooga, ama qofkii masuulkaas badala ama horjoogihiisa.
Haddii madaxweyne Trump uu bixiyay macluumaad sir ah oo muhiim ah, wuxuu jabiyay "sharci dahabi ah" sida uu sheegayo Frank Gardner oo ah weriyaha arrimaha ammaanka ee BBC.
"Waxaa dunida ka jira sharci dahabi ah oo basaasidda ku saabsan waana in haddii uu dal macluumaad sir ah la wadaago dal kale in dalkii sirta loo soo gudbiyay uusan dal saddexaad la wadaagin isaga oon la socodsiinin dalkii marka hore u soo gudbiyay," ayuu sii raaciyay Gardner.
"Arrintaas jawaabteedu way sahlan tahay: waxay noqo kartaa in ay halis gali karaan dadkii xogtaas u soo helay".